Caalamka, 27 May 2019
Xisbiyada asalka oo looga adkaaday doorashada Yurub
Nin loo xiray qarax ka dhacay, Lyon France
Doorashada Baarlamaanka M/ Yurub oo Maalntii 3-aad Gashay
Maalinti saddexaad ayay maanta gashay doorashada baaralamaanka Midowga Yurub, xilli ay kooxaha qowmiyiinta ee kasoo horjeeda muhaajiriinta ay rajo ka qabaan in ay guulo waaweyn kasoo hooyaan doorashadan, si ay u maamulaan xarunta Midowga Yurub ee Brusseles shanta sano ee soo socota.
Ra'iisul wasaare Theresa May oo is-casilaysa
Ra’iisul wasaraaha Britain, Theresa May ayaa sheegtay inay is-casili doonto kadib markii ay saddex goor ku guul darreysatay inay xubnaha baarlamanka ka dhaadhiciso heshiiskeeda Brexit.
Golaha Ammaanka oo warbixin laga siiyey Soomaaliya
Ku xigeenka ergayga Qaramada midoobay u qaabilsan Somalia ayaa warbixin uu siiyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ku sheegay in Somalia ay horumar ka samysay dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda, dib u eegista dastuurka iyo u diyaargarowga doorashada Guud.
Soomaali u tartameysa baarlamanka Yurub
Musharrixiinta u tartamaya baarlamaanka Midowga Yurub waxaa ku jira Soomaali ka ordaysa waddamada Sweden iyo Talyaaniga.
Mareykanka oo 'laba toddobaad u qabtay Turkey'
Aqalka Kremlin-ka ee looga arrimiyo Ruushka ayaa cambaareeyey kuna sheegay wax aan la aqbali karin waqti la sheegay in Mareykanka uu u qabtay Turkiga, si uu uga laabto heshiis uu ku iibsanayo habka difaaca gantaallaha Ruushka ee S-400, taa beddelkeedna uu iibsado midka Mareykanka ee Patriot.
Rabshado dhimasho sababay oo ka dhacay Jakarta
Xuutiyiinta oo ma kale weeraray Sacuudiga
Maleeshiyada Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa maanta sheegay inay weerareen keyd hub oo ku yaalla magaalada Koonfureed ee Najran ee dalka Sacuudiga.
Sacuudiha oo u Yeeray Jaamacadda Carabta
Dawladda Sucuudiga ayaa isugu yeertay shir degdeg ah oo ay yeeshaan waddamada ku jira ururka Jaamacadda Carabta iyo waddamada ku jira Golaha Iskaashiga Khaliijka.
Muslimiinta India oo Weeraro la Kulma
Kor u kac ku yimid weerarada ka dhanka ah Muslimiinta dalka India ayaa kor u qaaday welwelka ururada xuquuqda aadamaha, kuwaas oo dawladda ku boorrinaya inay qaaddo tallaabooyin ad-adag si ay u ilaaliso dadka la tirada badan yahay ee dalkaas